“ အဆိပ်အဆိပ်ကလူတွေကိုပျက်စီးစေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်” - Your Brain On Porn
“ အဆိပ်အဆိပ်ကလူတွေကိုပျက်စီးစေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်။ ”
လူအပေါင်းတို့သည်ညစ်ညမ်းနေသော်လည်းကျွန်တော်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာခေတ်ဆန်းဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီကငါသည်အဘယ်သူ၏ကုမ္ပဏီကိုသူဒါသူကပြောတယ်ရိုးသားသောကွောငျ့ငါကိုးကွယ်နေတဲ့အံ့သြဖွယ်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား။ ခါတိုင်းလိုအဖြစ်အနည်းငယ်အချိုရည်ကျော်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရယ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ငံရေးစကားပြောပြီးတော့သင်ဘယ်လောက်နဲ့တူပိုမိုနက်ရှိုင်းကိစ္စများမှအပေါ်ပြောင်းရွေ့ အမှန်?
အဖြေကတော့ကျမတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာပျော်ရွှင်စရာ၊ ကျေနပ်ရော၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသူသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက်မပျော်မရွှင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သြစတြေးလျ၌, လေးယောက်ကို web စာမျက်နှာများတွင်တဦးတည်း porn-ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေကိုပြန်ပြောင်းသတိရရင်တောင်ငါ့ရဲ့များသောအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ဟာပြောင်းလဲမှုကိုမြင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကဒီအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာတကယ့်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်၊
“ နေ့တိုင်းတံခါးဝမှာလမ်းလျှောက်ရတာနဲ့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲငါဟာကွန်ပျူတာရှေ့မှာရှေ့မှာထိုင်ပြီးဘောင်းဘီတိုတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းထိုင်ပြီးထိုင်နေမယ်ဆိုတာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါမပြောနိုင်ဘူး” ဟုသူကရှင်းပြခဲ့သည်။ ) ရိုးသားခဲ့ပါတယ်။
“ ဒီနေ့ခေတ်သမားရိုးကျညစ်ညမ်းမှုလို့အများကယူဆကြတဲ့အရာတွေကိုငါကြည့်နေတုန်းမှာပဲ၊ ဒါကိုရင်ဆိုင်ရမယ်၊ အစွန်းရောက်ပြီးလက်တွေ့မကျဘူးဆိုတာကိုသိရတာကတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ ငါကသူတို့ကိုသိချင်စိတ်ကိုနှိပ်ပြီးနှိပ်လိုက်တာ။
“ အသက်မပြည့်သေးတဲ့သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအရှက်ခွဲခံရပြီးအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အရာတွေ၊ ပြည့်ဝဖို့၊ ညစ်ညမ်းဖို့အပေါက်တွေသာဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရတာငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတယ် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာခံစားချက်ကိုမသိစိတ်အဆင့်မှာတန်ဖိုးမရှိသူနဲ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောသူတစ်ယောက်ခံစားခဲ့ရတာကိုမြင်ချင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းပြီးနာနေတာလဲ”
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်သဘောမတူနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးစာနာနားလည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်နေရာယူထားသည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထောက်ခံသည်၊ ငြင်းဆန်မည်မဟုတ်သော်လည်းယနေ့တွင်၎င်းသည်လိင်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အလွန်တကယ့်ကိုတုန်လှုပ်ဖွယ်ပြproblemနာဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျ၌, လေးယောက်ကို web စာမျက်နှာများတွင်တဦးတည်း porn-related နှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကျယ်ပြန့်အများစုဖြစ်ပါတယ် (ဘယ်နေရာမဆိုရာခိုင်နှုန်း 75 နှင့် 90 ကြား) အွန်လိုင်းလိင်အပေါ်စွဲရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းကို 7-10 နှင့်အတူယောက်ျားတို့ဖြစ်ကြသည်။
အမျိုးသမီးများအမြင်အရ porn အကြောင်းရေးသားခြင်းနှင့်အငြင်းပွားမှုများစွာရှိခဲ့သော်လည်းမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်စိတ် ၀ င်စားလာသည်၊ နားလည်လာသည်။ သို့သော်ယောက်ျားအများစုပြောသောစကားကိုကြားရသောကြောင့်သူတို့အများစုသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာကိုမကြိုက်ကြောင်းဝန်ခံသည် သူတို့ကို) သူတို့ရဲ့ Self- လေးစားမှုနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏အဓိပ္ပာယ်။
ဤလူများထဲမှတစ် ဦး မှာဗြိတိသျှလူရွှင်တော်နှင့်လိင်စွဲလမ်းသူ Russell Brand ဖြစ်သည်။ သူသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က russellbrand.com တွင်သူ၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်ခဲ့သည်။ “ အပြာစာပေဆိုတာငါမကြိုက်ဘူး။ ဒါဟာငါရေရှည်ကတိက ၀ တ်မပြုနိုင်တဲ့အရာပဲ မဟုတ် ကြည့်ပါ၊ ဒါကငါ့ရဲ့မိန်းမတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆက်နိုင်ပုံ၊ ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်၊
“ လိင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားသည်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်မျိုးပွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏စစ်မှန်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုမှသွေဖည်သွားသည်။ အကယ်၍ မင်းကိုအညစ်အကြေးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးနှက်နေတယ်ဆိုရင်အမှန်တရားနဲ့ဆက်နွှယ်နေဖို့တကယ်ခက်ခဲပါတယ်။ ”
ဗီဒီယိုတွင်သူသည်နေအစီရင်ခံစာကိုးကား ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင်အကြောင်းပိုမိုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်း၊ ရင်းနှီးသောစုံတွဲများအကြားယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ monogamy ၏မျှော်လင့်ချက်စွန့်လွှတ်; ယုံကြည်မှုကရာသဘာဝပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူက porn ထုရိုက်ရာမှနေရာတိုင်းသည်မည်မျှ softcore ၏ပြောသွားနှင့်ကြော်ငြာများတွင်ရေခဲ-လိမ်းဆေး fellating မိန်းမတို့အားဂီတဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်, နှင့်မည်သို့ဒီ voyeurism, objectification, အမျိုးသမီးများဆုဖလားနဲ့စစ်မှန်တဲ့နွေးထွေးမှုတစ်ခုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တူ၏ရှားပါးစုဆောင်းသောယုံကြည်ချက်၏ပြည်နယ်များမှဦးဆောင်နေသည်။
မဲလ်ဘုန်းမြို့စိတ်ပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာ Meredith Fuller သည် Brand နှင့်သဘောတူသော်လည်းငါကဲ့သို့သောအလင်းသည်အမှောင်ထုထဲတွင်အလင်းရောင်တောက်ပနေသည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောလွှမ်းမိုးမှုများခံရပြီးနောက်ဟောင်းနွမ်းလာပြီဖြစ်သောသို့မဟုတ်“ ပျင်းစရာကောင်းသည်” ဟုယူမှတ်သောအိမ်ထောင်ရေးကိုကယ်တင်ရန်သူမအားအကူအညီတောင်းသူများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များသည်ရည်းစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာသူတို့မျက်နှာပြင်တွင်တွေ့ရသောသက်မဲ့နှင့်လိုက်လျောသောအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်ခံစားချက်ကင်းမဲ့သည်။ သူမသည်ယောက်ျားများနှင့်များစွာသောသူတို့ကိုတွေ့မြင်နေပြီးတကယ့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုတမ်းတနေသည်။
ဖူလာက“ ဒီလူတွေဟာအများအားဖြင့်အသက် ၃၀ ကျော်နေပြီ။ "သူတို့ကအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရဲ့ကလစ်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့လိင်ပုံရိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လုယက်ခေါ်ဆိုမှုတွေလိုချင်သည်။ ဤအမျိုးသားများသည်ထိတွေ့မှု၊ သူတို့ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးချစ်ခင်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာဒီအမျိုးသားတွေမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ဖို့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ သူတို့ကဆံပင်ကိုအခမဲ့ pudendum ရှိဖို့လိုပြီးလိင်အကျင့်ယိုယွင်းဖို့နည်းလမ်းတွေနဲ့လိင်တူဆက်ဆံတာကိုစဉ်းစားမိတယ်၊ ငါစစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုကိုလိုချင်သောလူငယ်များစွာသည်လည်းမုတ်ဆိတ်မွေးကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများသည်ဆံပင်မရှိသောမိန်းမများအပေါ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သူတို့ပြောနေသလိုမျိုးသဘာဝဖြစ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ”
ခဝါသည်လိင်၏ Fulcrum တစ်ဦးထက်ပိုသောအလယ်အလတ်အနေအထားမှရွေ့လျားနေသည်အခြားမျှော်လင့်ချက်လက္ခဏာသက်သေတွေဖြစ်တဲ့လေဒီဂါဂါအဖြစ် trendsetters ပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်ပိုပြီးရင်ခုန်စရာတစ်ခုခုမှဝေးမျက်နှာကိုပုံရိပ်အတွက်တွန်းကန်အားကနေ swinging ဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
"သူမကဲ့သို့သောအဆိုတော်များသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းအသစ်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်ပုံကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်" "လိင်ကိုလှည့်ပတ်မျောနေရင်းနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အလွှာကိုပြန်သွားရမယ့်နေရာမရှိတော့ဘူး။ "
“ ငါတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုအမျိုးသမီးများအားကြည့်ရှုခြင်းထက်သူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်းထက်ဖြေရှင်းရန်” ကို Brand ကယောက်ျားများကိုတိုက်တွန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုကိစ္စကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့နားလည်နိုင်မည်နည်း မျိုးဆက်ပွားခြင်းနှင့်လူကြီးများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန်ပြသထားသောမူများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့မေတ္တာဖြင့်ဖော်ပြနိုင်မည်နည်း။ ”
သူသည်ဗီဒီယိုတွင်ကိုးကားထားသောဘုန်းတော်ကြီးတစ် ဦး ၏ကိုးကားချက်အားဖြင့် Brand ၏ရပ်တည်ချက်ကို“ အပြာပြသနာကပြသနာသိပ်မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သိပ်နည်းလွန်းတယ်” ဟူသောကိုးကားချက်အရအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
ငါသည်အလင်းနှင့်အရိပ်ပေါ်ငါဆောင်ခဲ့မည်ဟုဆိုသည်။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေကို ပြု. , ယခုမသာသည်သူ၏သစ်ကိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူမေတ္တာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်, သူကအမှန်တကယ်လည်းကိုယ်ကိုကိုယ် likes ။
အသက်အရွယ် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Wendy Squires သတင်းစာဆရာ, အယ်ဒီတာနှင့်စာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ တွစ်တာ: @Wendy_Squires
“ အရက်သေစာ၊ ဘိန်းဖြူနှင့်လိင်စသည့်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်တူညီကြသည်။ ” ဒေါက်တာ Raju Haleja၊ t.co/XTw77IIV8A
ဆောင်းပါးအသစ် - "ဆေးစွဲနေသောကမ္ဘာ၏အတွင်းပိုင်း" t.co/IRAmX9thxs